Yechitatu beta vhezheni yeApple 12 yakatoburitswa | Kubva kuLinux
Yechitatu beta vhezheni yeApple 12 yakatoburitswa kare
Mazuva mashoma apfuura Google yakazivisa kuburitswa uye kutanga kwekuyedzwa kweyechitatu beta vhezheni Android 12 uye iyo shanduko huru dzatinogona kuwana Kuenzaniswa neyechipiri beta vhezheni, semuenzaniso, iyo kugona kugadzira screenshots kufukidza kwete nzvimbo inooneka chete, asiwo zvirimo munzvimbo yekutsikisa.
Imwe yeshanduko inomira mune yechitatu beta vhezheni ndiyo kugona kuchengetedza zvirimo kunze kwenzvimbo inoonekwa iyo inoshanda kune ese maapplication anoshandisa iyo "Tarisa kupa" kirasi kutsigira kupururudza kwema skrini muzvirongwa zvinoshandisa chaiwo maficha, iyo ScrollCapture API inokurudzirwa.
Chimiro chinosanganisira nyowani yepamusoro-yekuita yekutsvaga injini AppSearch, iyo inobvumidza iwe kunongedza ruzivo pane chako chishandiso uye nekuita izere-zvinyorwa tsvakiridzo ine chinhanho mhedzisiro. Kutsvaga kunopa maviri marudzi emakesi: kuronga tsvakiridzo mune yega mashandisirwo uye kutsvaga iyo yese system.
API yawedzerwa kune iyo WindowInsets kirasi kuti itarise chinzvimbo chekuratidzira chekamera uye maikorofoni zviratidzo zvekushandisa (zviratidzi zvinogona kufukidza kutonga mune yakazara-skrini zvirongwa uye kuburikidza neiyo yakatsanangurwa API, iko kunyorera kunogona kugadzirisa yavo Interface).
Uye zvakare, chimwe chinhu chinoratidzwawo kumacentral anodzorwa zvishandiso kudzimisa kushandiswa kweswitch kuti mbeveve maikorofoni uye kamera.
YeCDM homwe (Companion Device Manager) zvishandiso zvinodzora zvinoenderana nemidziyo senge smartwatches uye vateedzeri vemuviri, iko kugona kwekutanga masevhisi anoshanda (kumberi).
Iyo yakavandudzwa otomatiki kutenderera kwescreen zvemukati, izvozvi unogona kushandisa kumeso kwechiso yekamberi kamera kuona kana iyo skrini inoda kutenderedzwa, semuenzaniso, kana munhu ari kushandisa foni akarara pasi. Kuti uve nechokwadi chekuvanzika, ruzivo rwunogadziriswa pane iyo nhunzi pasina chifananidzo chemufananidzo. Iyo ficha parizvino inongowanikwa paPixel 4 uye nyowani mafoni.
Pane rimwe divi mifananidzo yakagadziriswa kutenderera kwescreen, iyo yakadzora kunonoka kusati kwachinjika neinenge 25% uye akawedzera mutambo modhi API uye marongero anoenderana kudzora mashandiro yemutambo; semuenzaniso, iwe unogona kupira kuita kuti uwedzere hupenyu hwebhatiri kana kushandisa zvese zviripo zviwanikwa kuti uwane yakawanda FPS.
Imwe shanduko ndeyekuti yakawedzera kutamba-se-iwe-kurodha kurodha midziyo yemutambo kumashure panguva yekumisikidza, ichikubvumidza iwe kuti utange kutamba kurodha pasi kwapera.
Uyewo, Chikunguru Android Security Patch Yakaburitswaque inogadzirisa 44 kudzvinyirira, pane iwo manomwe akaverengwa akatsoropodza uye mamwe ese ari pamusoro. Nyaya dzakanyanya kunetsa dzinobvumidza kurwisa kuri kure kuti vaite kodhi yavo pane ino system. Nyaya dzakaratidzirwa zvine ngozi dzinobvumira kodhi kumhanya muchimiro cheyakarongeka nzira nekunyengerera zvemuno zvekushandisa.
6 kudzvinyirira kwakakomba kunokanganisa zvivakwa zvemidziyo yeQualcomm machipisi uye Widevine DRM module (buffer inopfachukira kana ichigadzirisa chechitatu-bato zvemukati). Uye zvakare, kushomeka kunogona kucherechedzwa muiyo Android Sisitimu, Android Media Sisitimu uye Android system zvikamu zvinokutendera iwe kukwidziridza rombo rako pane ino system.
Chekupedzisira, zvinotarisirwa kuti kuvhurwa kweshanduro nyowani yeApple 12 kana zvese zvikafamba mushe, izvi zvinouya mukati mekota yechitatu yegore rino 2021.
Nezve firmware inovaka Yakagadzirirwa kubva kune ino yechitatu beta vhezheni yeApple 12, parizvino inowanikwa yePixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a / 4a 5G uye Pixel 5 zvishandiso, pamwe nemamwe maUSUS , OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo, Xiaomi uye ZTE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Android » Yechitatu beta vhezheni yeApple 12 yakatoburitswa kare
Clapper: Iyo GNOME media player ine inoteerera GUI
Hasha Dzakaburitswa: Kunakidzwa uye yazvino chiito mutambo wekutamba pane Linux